Lammiiwwan Zaambiyaa Prezidaantii Filachuuf Sagalee Kennaa Jiran
Hagayya 12, 2021
Lammiiwwan Zaambiyaa kamisa har’aa prezidaantii haaraa, miseensota paarlaamaa fi bakka bu’oota naannoo filachuuf jecha har’a gara wiirtuulee filannoo deemaa kan jiran yoo ta’u, xiinxaltoonni akka jedhanitti dimokraasii Afriikaa keessaaf biyya utubaa jedhamtuuf qormaata ta’uuf jira.
Kan umuriin waggaa 64 prezidaant Edgaar Luunguu, hoogganoota garee mormituu keessaa kan ta’an kan umuriin wggaa 59 Hakaniidee HIcheleemaa biraa dorgommiin cimaan isaan mudachuuf jira. Dorgommiin cimaan kan geggeessamu ta’uu isaaf kunis hegeree siyaasa biyyattii kan murteessu ta’uu xiinxaltoonni tilmaamaniiru.
Dhiyeenya walitti bu’iinsa deggertoota paartilee ijoo lamaan gidduu, paartii biyya bulchuu fi paatii mormituu paartii tokkummaa misooma biyyoolessaa gidduutti ta’een yaaddoon nageenyaa hammaataa adeeme. Walitti bu’iinsa sana keessatti namoonni lama du’anii jiran. Seera eegsisuuf akkasumas ennaa filannoon geggeessamu hookkarri akka hin kaane ittisuuf poolisiin bobbaafamee jira.
Gareeleen mormitootaa garuu, waraanni bobbaafamuun deggertoota keenya sodaachisuu fi doorsisuuf yoo jedhan dubbi himtuun poolisii Esther Katoongoo garuu himannaa sana ni haalan.
Gumiin waldoota Kirstaanaa Zaambiyaa filannoon sun utuu hin jalqabin dura hookkarri akka hin kaane waamicha dabarsee jira.